नेपाली विदेश दौडिन्छन् : कयौँ नेपाली गीतमा स्वर दिएका भारतीय गायक सोनु नेपालकै अस्पताल भर्ना::आर एम खबर
नेपाली विदेश दौडिन्छन् : कयौँ नेपाली गीतमा स्वर दिएका भारतीय गायक सोनु नेपालकै अस्पताल भर्ना
काठमाडौं । चर्चित नेपाली पुराना गीतहरुमा आवाज भरेका भारतीय गायक सोनु निगमको स्वास्थ्यमा पछिल्ला दिनहरुमा समस्या आइरहेको छ । नेपालका ठुला र धनी व्यक्तिहरु उपचारका लागी लाखौं करोडौं खर्चेर विदेश जाने गर्दछन तर गायक निगम भने थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पतालमा भर्ना भएका छन् ।
एउटा गीतको भिडियो सुटिङका लागि नेपाल आएका उनी ढाडमा असह्य पीडा महसुस भएपछि आज दिउँसो साढे एक बजे अस्पताल भर्ना भएको अस्पतालले जनाएको छ ।
उनको रक्तजाँच तथा एक्स रे गरिएको र एमआरआई पनि गरिने अस्पताल जानकारी दिएको छ । अस्पतालका अनुसार उनलाई अहिले नर्भिक अस्पतालको भीआईपी स्वीट ५०१ मा राखिएको छ भने डा. पंकज जलान, डा. प्रवीण नेपाललगायतको टिमले उनको उपचार गरिरहेको छ ।
अस्पताल स्रोतले भनेको छ, ‘आज उहाँलाई होटल फर्काउने कि अस्पतालमै राख्ने भन्ने कुरा एमआरआईको रिपोर्ट हेरेपछि मात्र थाहा हुन्छ ।” उनको स्वास्थ्य अवस्था हेर्दा आज राती अस्पतालमा नैं रहन सक्ने जनाइएको छ ।
चर्चित नेपाली पुराना गीतहरुमा आवाज दिएका भारतीय गीतकार सोनु निगम यसअघिपनि अस्पताल भर्ना भएका थिए । बलिउडमा चर्चित गायक निगमको आँखामा भएको एलर्जी बढेको थियो । जसका कारण सोनु निगम फेरि अस्पताल भर्ना भएका हुन् । एक हप्ता अघि गायक सोनु निगमले उनको सामाजिक सञ्जालमार्फत सी फूडका कारण उनको स्वास्थ्य बिग्रिएको भन्दै तस्बिर सार्वजनिक गरेका थिए ।
फेब्रुअरी ६ मा निगमले उनको इन्स्टाग्राम अकाउन्टमार्फत २ वटा फोटो शेयर गरेका थिए । तस्बिरमा उनको एउटा आँखा सुन्निएको थियो भने अर्को तस्बिरमा उनी अक्सिजन माक्स लगाएका थिए । त्यही दिन अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएर घर फर्किएका सोनुको बुधबार फेरि स्वास्थ्य बिग्रिएको हो । उनी फेरि अस्पताल भर्ना भएका छन् । उनको स्वास्थ्य लाभको लागि अहिले संसारभरबाट प्रार्थना गर्नेहरुको ओइरो लागेको छ । एजेन्सी